48.0575°N 4.5914°W ﻿ / 48.0575; -4.5914 I Goulien dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29063. I Henri Goardon no benny tanàna man ...
48.6300°N 4.2994°W ﻿ / 48.6300; -4.2994 I Goulven dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29064. I Yves Uguen no benny tanàna mandritr ...
48.0206°N 4.2656°W ﻿ / 48.0206; -4.2656 I Gourlizon dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29065. I Guy Marzin no benny tanàna mand ...
48.1700°N 3.9708°W ﻿ / 48.1700; -3.9708 I Gouézec dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29062. I Cécile Nay no benny tanàna man ...
48.0425°N 4.2042°W ﻿ / 48.0425; -4.2042 I Guengat dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29066. I Yvon Dagorn no benny tanàna mandr ...
48.5183°N 3.5872°W ﻿ / 48.5183; -3.5872 I Guerlesquin dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29067. I Paul Uguen no benny tanàna ma ...
48.5519°N 3.9603°W ﻿ / 48.5519; -3.9603 I Guiclan dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29068. I Raymond Mercier no benny tanàna m ...
48.0167°N 4.3583°W ﻿ / 48.0167; -4.3583 I Guiler-sur-Goyen dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29070. I Christian Jolivet no ben ...
48.4253°N 4.5567°W ﻿ / 48.4253; -4.5567 I Guilers dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29069. I Pierre Ogor no benny tanàna mandrit ...
47.9369°N 3.4144°W ﻿ / 47.9369; -3.4144 I Guilligomarch dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29071. I Alain Follic no benny tanàn ...
47.7961°N 4.2825°W ﻿ / 47.7961; -4.2825 I Guilvinec dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29072. I Hélène Tanguy no benny tanàna m ...
48.6678°N 3.7075°W ﻿ / 48.6678; -3.7075 I Guimaec dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29073. I Georges Lostanlen no benny tanàna ...
48.4886°N 3.9958°W ﻿ / 48.4886; -3.9958 I Guimiliau dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29074. I Louis Fagot no benny tanàna man ...
48.4342°N 4.3994°W ﻿ / 48.4342; -4.3994 I Guipavas dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29075. I Alain Queffélec no benny tanàna ma ...
48.4911°N 4.5731°W ﻿ / 48.4911; -4.5731 I Guipronvel dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29076. I Annick Cariou-Lemoine no benny t ...
48.6347°N 4.4075°W ﻿ / 48.6347; -4.4075 I Guissény dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29077. I Raphael Rapin no benny tanàna mand ...
48.3275°N 4.1586°W ﻿ / 48.3275; -4.1586 I Hanvec dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29078. I Marie-Claude Morvan no benny tanàna ...
48.6331°N 3.9267°W ﻿ / 48.6331; -3.9267 I Henvic dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29079. I Annick Corre-Gillet no benny tanàn ...
48.365°N 3.7436°W ﻿ / 48.365; -3.7436 I Huelgoat dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29081. I Corentin Garrec no benny tanàna ...
48.3286°N 4.2406°W ﻿ / 48.3286; -4.2406 I Hôpital-Camfrout dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29080. I Lucien Cévaer no benny tan ...
48.3711°N 4.2111°W ﻿ / 48.3711; -4.2111 I Irvillac dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29086. I Jean-Noel Le Gall no benny tanàna ...
48.2753°N 3.6183°W ﻿ / 48.2753; -3.6183 I Kergloff dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29089. I Pierrot Belleguic no benny ta ...
48.0928°N 4.2725°W ﻿ / 48.0928; -4.2725 I Kerlaz dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29090. I Michel Kervoalen no benny tanàn ...
48.6461°N 4.3644°W ﻿ / 48.6461; -4.3644 I Kerlouan dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29091. I Charlotte Abiven no benny tanàna m ...
48.5719°N 4.4178°W ﻿ / 48.5719; -4.4178 I Kernilis dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29093. I Pierre Adam no benny tanàna mandri ...
48.5903°N 4.3475°W ﻿ / 48.5903; -4.3475 I Kernoues dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29094. I Jacques Mer no benny tanàna mandri ...
48.4733°N 4.3731°W ﻿ / 48.4733; -4.3731 I Kersaint-Plabennec dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29095. I Jean-Yves Roquinarch no ...
48.3925°N 3.8522°W ﻿ / 48.3925; -3.8522 I La Feuillée dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29054. I Yves Le Floch no benny tan ...
48.4300°N 4.3147°W ﻿ / 48.4300; -4.3147 I La Forest-Landerneau dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29056. I Yvon Bescond no benny ...
47.9100°N 3.9778°W ﻿ / 47.9100; -3.9778 I La Forêt-Fouesnant dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri Bretagne, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29057. I Raymond Péres ...
48.4497°N 4.1581°W ﻿ / 48.4497; -4.1581 I La Martyre dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29144. I Pierre Quelennec no benny tanàna ...
48.4736°N 4.2033°W ﻿ / 48.4736; -4.2033 I La Roche-Maurice dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29237. I Jean-François Jaouanet no ...
48.4928°N 4.0417°W ﻿ / 48.4928; -4.0417 I Lampaul-Guimiliau dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29097. I Jean-Louis Puchois no b ...
48.4497°N 4.7653°W ﻿ / 48.4497; -4.7653 I Lampaul-Plouarzel dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29098. I Didier Le Gac no benny ta ...
48.5611°N 4.6539°W ﻿ / 48.5611; -4.6539 I Lampaul-Ploudalmézeau dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29099. I Patrice Cottebrune no ...
48.5531°N 4.3867°W ﻿ / 48.5531; -4.3867 I Lanarvily dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29100. I Marie-Gabrielle Ogor no benny tan ...
48.2289°N 3.7272°W ﻿ / 48.2289; -3.7272 I Landeleau dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29102. I Michel Salaün no benny tanàn ...
48.5100°N 4.0669°W ﻿ / 48.5100; -4.0669 I Landivisiau dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29105. I Georges Tigréat no benny tanà ...
48.0903°N 4.0592°W ﻿ / 48.0903; -4.0592 I Landrévarzec dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29106. I Lucien Kerrec no benny tanàn ...
48.0631°N 3.9761°W ﻿ / 48.0631; -3.9761 I Landudal dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29107. I Raymond Messager no benny tanàna ...
48.0011°N 4.3353°W ﻿ / 48.0011; -4.3353 I Landudec dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29108. I Noel Cozic no benny tanàna mandr ...
48.5333°N 4.7256°W ﻿ / 48.5333; -4.7256 I Landunvez dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29109. I Jean-Michel Bizien no benny tanàn ...
48.2922°N 4.2647°W ﻿ / 48.2922; -4.2647 I Landévennec dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29104. I Roger Lars no benny tanàna ...
48.0678°N 3.9114°W ﻿ / 48.0678; -3.9114 I Langolen dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29110. I Didier Roignant no benny tanàna ...
48.5817°N 4.2089°W ﻿ / 48.5817; -4.2089 I Lanhouarneau dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29111. I Eric Pennec no benny tanàna ...
48.4739°N 4.7444°W ﻿ / 48.4739; -4.7444 I Lanildut dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29112. I Raymond Mellaza no benny tanàna ma ...
48.6481°N 3.7142°W ﻿ / 48.6481; -3.7142 I Lanmeur dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29113. I Jean-Luc Fichet no benny tanàna m ...
48.4983°N 4.2014°W ﻿ / 48.4983; -4.2014 I Lanneuffret dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29116. I Noel Ménes no benny tanàna mand ...
48.5708°N 4.5189°W ﻿ / 48.5708; -4.5189 I Lannilis dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29117. I Claude Guiavarch no benny tanàna m ...
48.4894°N 3.6714°W ﻿ / 48.4894; -3.6714 I Lannéanou dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29114. I Michèle Beuzit no benny tanàna ...